3 Koorsooyinka loo baahan yahay in lagu daro Mashruuca Maareynta Mashruuca Shaqaalaha PMP
Maareynta Mashruuca (PMP) waa deeq caalami ah oo la aqoonsan yahay oo ay bixiso Mashruuca Maareynta Mashruuca (PMI). Waxaa laga yaabaa inaad ogtahay in hadda 729,552 ay firfircoon tahay PMP shakhsiyaadka shahaadada leh iyo cutubyada loo yaqaan '284' ee ku yaala wadamada 210 iyo dhulalka caalamiga ah ee 9. Tababbarka PMP ee tababarka PMP (Training Management Professional) ee tababarka PMP ee Gurgaon, Noida, Delhi NCR, guud ahaan wax ka badan magaalooyinka XNUMX ee Hindiya, USA, UK iyo Australia. ITS waxay sidoo kale bixisaa internetka Tababarka Maareynta Maareynta Maareynta Mashruuca Xirfadlaha Xirfadlaha si aad iskugu diiwaangaliso Tababarka interneedka
Maareynta Maareynta Mashruucyada Tababarka Xirfadaha Shaqada
1. Mashruuca Maareynta Mashruuca (PMP)
Xulo oo ku dhaqmaan PMP-gaaga
2. Maareynta Barnaamijka (PgMP)
Soo qaado oo Joogso PgMP-gaaga
3. Associate Certified Associate Management (CAPM)
Soo qaado oo sii wad CAPM-gaaga
Mashruuca Maareynta Mashruuca (PMP) waa shahaadada ugu muhiimsan ee warshadaha ee laga filayo kormeerayaasha mashruuca.
Waxaad ogaan kartaa mashaariicda PMPs mashaariicda waddanka oo dhan, iyo waliba shahaadooyin kale oo noocyo kala duwan ah oo diirada saaraya geo gaar ah ama aag, PMP® waa dhab ahaan aduunka oo dhan. Maaddaama PMP, waxaad ku shaqeyn kartaa warshad kasta oo muhiim ah, nidaam kasta iyo meel kasta.
PMP waxay sidoo kale sii ballaarineysaa fursadaha aad ku heli kartid. Kuwa haysta shahaadada PMP waxay helayaan 20 boqolkiiba in ka badan kuwa ay ka midka yihiin kuwa aan shahaadada lahayn sida ku cad Shaxda Awoodda: Maareynta Maareynta Mashruuca Mashruuca Mushaharka, Ninth Edition.
Sidoo kale shirkadaha ganacsiga ayaa faa'iido leh. Marka la eego xaddiga 33% ee hogaamiyayaasha mashruucoodu waa PMP, shahaadooyinka waxay ku dhammeeyaan mashaariic badan oo ku saabsan waqtiga, qorshaha kharashka iyo ujeedooyinka gaarka ah. (Beat ee Daraasada Profession®, PMI, 2015.)
PMP waxay ka hadlaysaa inaad ku hadasho oo aad fahamto lahjadda adduunka ee maareynta maareynta mashruucyada iyo iskaashatooyinka aad u leedahay koox xirfadleyaal ah, ururo iyo khabiiro aduunka oo dhan. Waxaa loo beddelay PMP waxayna noqotaa mashruuc yar.
Haddii aad tahay maamulaha mashruuca oo dhammeystiran ee dhammaan qaybaha mashruuca gaadiidka, wadista iyo isuduwidda kooxaha isu-xilqalayaasha, markaa PMP waa go'aan sax ah.
Imtixaanka shahaadaynta wuxuu leeyahay 200 weydiimaha kala duwan, waxaadna haysataa afar saacadood si aad u dhamaysid.
Si aad u sii wadato PMP-gaada, waa inaad ku guuleysataa qaybaha hagaajinta xirfadaha ee 60 (PDUs) sida saacadaha shaqada.
Adoo ah kormeeraha barnaamijka, waxaad tahay khabiir heer sare ah oo ku saabsan dhiigbaxa qulqulka ujeedooyinka muhiimka ah ee ururka. Waxaad la macaamileysaa mashaariic kala duwan oo la xidhiidha mashaariicda la xidhiidha, oo lagu fulinayo faa'iidooyin aan dhici karin haddii mashaariicda la daryeelo si madaxbannaan.
Maamulkaagu waa qalab. Horumarinta maaraynta barnaamijka, mashaariicda ururku si aad ah ayey uga faa'iidaystaan ​​marka loo eego - 76 boqolkiiba waxa ay ka dhigan tahay 54 boqolkiiba sannadkii ugu dambeeyey ee Warbixinta Xirfadda Profession®. Barnaamijka Maareynta Maareynta Barnaamijka (PgMP) ® waa calaamad muujinaysa fahamkaaga iyo khibraddaada iyo inaad ku siisid meel aan fiicnayn oo ku saabsan shaqada iyo horumarka.
Marka aad fursad u haysato inaad karti u leedahay inaad la macaamilato mashaariic kala duwan oo la xidhiidha, waxaadna sahamisaa layliyo isku dhafan oo jimicsiga kartida, ururada, aagagga ama bulshada iyo inaad wax ka bedesho natiijooyinka ujeedooyinka sarreeya, ka dibna waxaad noqon kartaa PgMP.
Si loo bilaabo wakhtiga qiimeynta waa baaritaanka guddiga
Imtixaanka shahaadaynta wuxuu leeyahay 170 wax badan oo ku saabsan baarista go'aan qaadashada, waxaadna haysataa afar saacadood inaad ku dhammeysato.
Si aad u sii wadato PgMP-gaaga, waa in aad soo iibsataa qaybaha hagaajinta xirfadaha ee 60 (PDUs) si joogto ah.
Inkasta oo xirfadlahaagu uu qabanqaabiyo, Associate Certified Associate Management (CAPM) ® waa faa'iido kaa caawin kara suuqa shaqada iyo hagaajinta asturnaantaada iyo ku filnaanshaha qaadashada tallaalka - ama kooxo - mashruuc.
Ururada leh nidaamyada habdhismeed waxay ku guuleystaan ​​natiijooyin ka sii wanaagsan, sida muuqata sanadkeenii ugu dambeeyay ee Warbixinta Xirfadda Profession®. Maaddaama CAPM® ay u aragto aragti aad ku yeelato heerarka adage ee adduunka oo dhan, waxaad u soo bixi doontaa madaxyada waxaadna diyaar u tahay inaad hore u riixdo.
Maareynta Mashruuca waa si dhakhso ah loo wacyigeliyo. Iyadoo loo marayo 2020, 1.57 million shaqooyin cusub ayaa la samayn doonaa sannad kasta, xirfadlayaasha takhasuska leh ayaa la raadiyaa kadib. Iyada oo CAPM, waxaad noqon doontaa waddada si aad ugu guulaysato xaalad.
Haddii ay dhacdo in aad ka boodi karto fursad aad ku kormeerto mashaariicda waaweyn oo aad ku kasbato waajibaad ama aad ku dareyso maareynta maareynta mashruuca qaybtaada hadda, ka dibna Ururka Xirfadlaha Mashruuca ee Mashruuca (CAPM) ayaa kugu haboon.
Imtixaanka shahaadaynta wuxuu heystaa 150 weydiimaha kala duwan ee go'aanka, waxaadna haysataa seddex saacadood inaad ku dhammeyso.
Si aad u sii wadato CAPM-ga, waa inaad dib u qaadataa imtixaanka sida saacadaha shaqada.